June 11, 2021 - Amawpyay
အမဲစက်တင်းတိတ်အဆီအဖုအတွက်အိမ်တွင်းဆေးနည်း အ ဆီ ဖု၊ တင်း တိပ်နှင့် အ မဲ စ က်များအ တွက် အိမ်တွင်း နည်း လမ်း ကောင်းဒီ ခေါင်း စဉ်က မေး တဲ့ သူ အရ မ်း အရမ်းများ ပေ မယ့် I reneတင် မယ့်အလှည့်ကို မ ရောက်နိုင်လို့ ဒီ နေ့တော့ ဖြစ်အောင် တင်ပါ ပြီ ရှင် ဒါ က တော့ ထော ပတ်စေ့ သွေး လိမ်းနည်းပဲ ဖြစ်ပါ တယ်၊ ဆောင်း …
အရမ်းကောင်းတဲ့စာ. . . . ကိုယ့်စိတ်နဲ့နှိုင်း မရိုင်းစေနဲ့တဲ့
အရမ်းကောင်းတဲ့စာ. . . . ကိုယ့်စိတ်နဲ့နှိုင်း မရိုင်းစေနဲ့တဲ့ အရမ်းကောင်းတဲ့စာ. ကိုယ့်စိတ်နဲ့နှိုင်း မရိုင်းစေ နဲ့တဲ့ သင့်အချိန် ၁ မိနစ်လောက်ပေးပြီး ဒီစာလေးကို ဆုံးအောင် ဖတ်ကြည့်ပါ ။ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ နှိုင်း မရိုင်းစေနဲ့ တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာမှာ သူခိုးဝင် ခိုးတော့ ရွာသားတွေ ဝိုင်းပြီး ဖမ်းကြသတဲ့။ သူခိုးကလည်း ကြံရာမရ ဖြစ်ပြီးတော့၊ မနီးမဝေးမှာ ရှိနေတဲ့ သင်္ချိုင်းထဲကို ကမန်းကတမ်းနှင့် ဝင်ပြေးပြီး ပုန်းနေရ ပါသတဲ့ ။ ရွာသားတွေ ပြန်လည် ထွက်ခွါ သွားတော့မှ ပုန်းနေရာကနေ ခေါင်းကလေးပြူပြီး ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်လိုက်တော့ သူနှင့် မလှမ်းမကန်းမှာ ရသေ့တစ်ပါး …
သင့်ကို ချမ်းသာစေ နိုင်သည့် နည်းလမ်း ၁၆ချက်
သင့်ကို ချမ်းသာစေ နိုင်သည့် နည်းလမ်း ၁၆ချက် ၁။ ကိုယ်ပိုင် နည်းလမ်း များဖြင့် အသက်ရှင် နေထိုင်ပါ။ ၂။ လောင်းကစား မလုပ်ပါနဲ့။ ၃။ နေ့စဉ် စာဖတ်ပါ။ ၄။ မလိုအပ်ဘဲ Facebook သုံးနေတဲ့ အချိန်တွေကို လျော့ချ ပါ။ ၅။ စိတ်ခံစားချက် များကို ထိန်းချူပ် ပါ။ ၆။ ကောင်းမွန်တဲ့ အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများ ရှာဖွေပါ။ ပုံမှန် စေတနာ့ ၀န်ထမ်း လုပ်ပါ။ ၇။ အလုပ် နှင့် စီးပွားရေးထက် ကျော်လွန်ပြီး လုပ်ဆောင် တတ်အောင် လေ့ကျင့်ပါ။ ၈။ ဆန္ဒရှိတာတွေကို လျော့ချပြီး …
လူချစ်လူခင်ပေါသူဖြစ်ဖို့ ပျိုးထောင်ရမယ့် အလေ့အကျင့် (၅) ခု
လူချစ်လူခင်ပေါသူဖြစ်ဖို့ ပျိုးထောင်ရမယ့် အလေ့အကျင့် (၅) ခု ၁။ မပြောဘူး သိပေမဲ့ အတင်းဝင် မပြောတတ်တဲ့ အကျင့်ကို မွေးပါ ။ အရာရာငါသိ ငါတတ် လုပ်သူ ကို ဘယ်သူ မှ သဘောမကျ ပါဘူး ။ မသိ ဘဲ ဝင်ပြောတဲ့ အကျင့်ကိုတော့ ဖျောက် ပစ် ရ မှာဖြစ် ပါ တယ် ။ ၂ ။မငြီးငြူဘူး အမြဲတမ်းငြီးငြူနေသူကို ဘယ်သူမှ သဘောမကျပါဘူး။ တော်ရုံနဲ့ မငြီးငြူ တတ် တဲ့ အကျင့် ကို လည်း ပျိုးထောင် ရမှာ ဖြစ် ပါ တယ် …
အမေ့ကို တန်ဖိုးထားသလို မိန်းမကိုလည်း တန်ဖိုးထားပါ
အမေ့ကို တန်ဖိုးထားသလို မိန်းမကိုလည်း တန်ဖိုးထားပါ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါမှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက်မိတယ် ။ အသင့်အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အားနွဲ့နွဲ့ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ နူးညံလှပတဲ့ မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော်သေချာ ကြည့်နေရင်းကနေ အတွေးတစ်ချို့ဝင်လာပြီး ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ ကျွန်တော့ဟာကျွန်တော် တွေးနေမိတယ် ။ မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လိုပါလိမ့် ? ကျွန်တော်နဲ့ မင်္ဂလာမ​ဆောင်ခင်​က မိဘ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အချစ်တွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းမှု့အောက်မှာ နေပြီကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။ အခုကြ တစ်ချက်ထဲ ရုတ်တရက်မှာပဲ သိတောင်မသိထားတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဘေးမှာ အမိန့်နာခံရင်းနဲ့ အိပ်စက်နေရပြန်တယ် ။ ကျွန်တော့ကြောင့် တစ်သက်လုံး အတူနေလာတဲ့ မိဘ​တွေကိုစွန့့့်ခွာလာတယ်​။ ကျွန်တော့ကို ပင်ပင်ပန်းပန်းပြုစုပြီးရင် ကျွန်တော့ရဲ့ မပြောပလောက်တဲ့ စကားလေးတွေနဲ့ …